Nanomboka tamin’izay dia tapaka fa ny 51 %-n’ny fitantanana dia nosahanin’ny kaompania Air Madagascar ary ny 49 % kosa no an’ny Air Austral. Ny 12 oktobra 2017 no voafidin’ny filankevi-pitantanana ho tale jeneraly vaovaon'ny Air Madagascar i Besoa Razafimaharo. Hatramin’izao dia tsy mbola tafarina ihany ny Air MAD. Mitohy ny fitarainan’ny mpanjifa amin’ny kalitao, ny fahataran’ny sidina lava sy ny fahasimbana matetika an’ireo Airbus roa A 340 manginy fotsiny. Tsiahivina anefa fa nandoavan’i Madagasikara 101 tapitrisa dolara tamin’ny Air France ireo noho ireo olana maro samihafa. Hatreto dia tsy nahavita nanarina ny kaompaniam-pitaterana malagasy ny fiaraha-miasa natao tamin’ny Air Austral izay kaompania fantatra ihany koa fa ao anatin’ny fahasahiranana ara-bola tanteraka amin’izao fotoana. Tonga hatramin’ny fametraham-pialan’ny Tale jeneralin’ny Air Madagascar, Besoa Razafimaharo tamin’ny faran’ny herinandro teo ny raharaha. Anio no hankatoavin’ny mpikambana ao amin’ny filakevim-pitantana na tsia io fangatahana io ary handrasana ny tohiny .